Somaliland: Shir-Gudoonka Golaha Wakiilada Oo Isku Bedel Ku Sameeyey Gudiyada Iyo Kalfadhigii 30-aad Oo Saaka Furmay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Shir-Gudoonka Golaha Wakiilada Oo Isku Bedel Ku Sameeyey Gudiyada Iyo Kalfadhigii...
Ajandaha kal-fadhiggii 30-aad,fadhigiisii koowaad ee golaha Somaliland ayaa maanta si rasmiya uga furmay xarunta golaha wakiilada Somaliland.
Fadhiggan ay maanta yeesheen mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ayaa waxaa hoggaaminayey guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Md.Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi CIRRO,Waxaana ku wehelinayey guddoomiye Ku-xigeenka koowaad ee iyo labaad ee aqalka Baarlamaanka Somaliland.
Kalfadhigan ay manta yeesheen mudanayaashu ayaa waxa badiba kazoo xaadiray xildhibaanada golaha wakiilada iyada oo lagaga hadli doono arimo badan oo horyaala mudanayaasha.
Waxana kalfadhigan furay gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Cirro waxaana uu ku dhawaaqay inuu kalfadhigu furan yahay balse maalinta bari ah ay xildhibaanadu ka doodi doonaan arimo badan oo horyaala.
Gabagabadiina xildhibaanada waxa loo qaybiyay waraaqa kalfadhiga, iyada oo maalinta bari ahna ay mudanayaashu ka doodi doonaan arimo badan.
Somaliland: Reer Baligubadle Oo Qalbi Furan Ku Qaabilay Murashaxa Waddani